Bezzia bu webusaiti so na ndi otu nnukwu Intanet intaneti AB. Peeji anyi raara nye nwanyi nke oge a, nwanyi nwere onwe ya, onye na-arusi oru ike nke nwere nchegbu. Ebumnuche nke Bezzia bụ ime ka onye na-agụ ya nweta akụkọ kachasị ọhụrụ na ejiji, ịma mma, ahụike na ọmụmụ nwa, n'etiti ndị ọzọ.
Ndị editọ otu anyị nwere ọpụrụiche na mpaghara dịka akparamaagwa, nkuzi, ejiji na ịma mma ma ọ bụ ahụike. N'agbanyeghị alaka ụlọ ọrụ ha dị iche iche, ha niile nwere otu ebumnuche, agụụ maka nkwukọrịta. Ekele dịrị ndị nchịkọta akụkọ Bezzia, n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ebe nrụọrụ weebụ anyị na-erute ọtụtụ ndị na-agụ. Nkwenye anyị bụ ịnọgide na-eto eto ma na-enye ọdịnaya kachasị mma.
El Bezzia otu editọ Ọ bụ ndị editọ na-eso ya:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ akụkụ nke ndị otu egwuregwu Bezzia ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime weebụsaịtị anyị ndị ọzọ metụtara ụmụ nwanyị, dejupụta fọm a.
Diana Millan kwuru
Onye edemede, onye ntụgharị okwu, na - ede blọgụ na nne. Amuru m na Barcelona na iri ato na ato gara aga, ogologo oge oburu ndi ogwu, ejiji, egwu na akwukwo. N'ịchọ ịmata ihe ma bụrụkwa nke a na-akpachapụghị anya site na okike, mụrụ anya mgbe niile ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla ndụ na-enye anyị!
Kemgbe m dị obere, o doro m anya na ihe m bụ ịbụ onye nkuzi. N'ihi ya, enwere m ogo mmụta na English Philology. Ihe enwere ike ijikọta ya na agụụ m maka ejiji, ịma mma ma ọ bụ ihe ndị dị ugbu a. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye obere egwu rock na ihe ndị a niile, anyị enweela menu niile.
Afọ iri atọ na ụfọdụ ọmụmụ raara nye ụwa nke injinia, enwere ọtụtụ agụụ na-eri oge m. Enwere m ohere ịmụ otu n'ime ha, egwu; Ma nke abụọ, isi nri, a na-akụziri m onwe m. Ebe ọ bụ na m jere ozi dị ka nne m, m na-echeta ịnụ ụtọ ntụrụndụ a nke m nwere ike ịkọrọ gị ugbu a site na Actualidad Blog. M na-eme ya site na Bilbao; M bi ebi ebe a, agbanyeghị na m na-agba mbọ ileta ebe niile enwere ike iburu m akpa azụ n'ubu m.
Nne, onye nkuzi nkuzi puru iche, psychopedagogue ma nwee mmasi banyere ide na nkwurita okwu. A ofufe nke mma na ezi uto, M mgbe niile na-aga n'ihu mmụta ... na-eme ka m ahuhu na ihe omume ntụrụndụ m ọrụ m. Nwere ike ịga na nke m weebụsaịtị nkeonwe ịmara ihe niile.
Achọ m ụdị nke kachasị mma, achọpụtara m na isi ihe na-eme ka ndụ dị mma bụ itule. Karịsịa mgbe m ghọrọ nne ma chọọ ịmaliteghachi ndụ m. Nguzogide dị ka echiche nke ndụ, imeghari na mmụta bụ ihe na-enyere m aka ụbọchị ọ bụla iji nwee mmetụta dị mma na akpụkpọ ahụ m. M omiiko banyere ihe niile ejiri mee, ejiji na ịma mma na-eso m ụbọchị m ụbọchị. Ide ederede bụ agụụ m na afọ ole na ole, ọrụ m. Soro m ma m ga - enyere gị aka ịchọta nguzozi gị iji nwee ọ fullụ na ndụ zuru oke.
Site na nzere na Mgbasa Ozi, ihe kachasị amasị m bụ ide. Na mgbakwunye, enwere m mmasị na ihe niile na-atọ ụtọ ma mara mma, ọ bụ ya mere m ji bụrụ onye na-achọ mma, ejiji na usoro ịma mma. Ana m enye aro na echiche iji mee ka ha baara ndị ọzọ uru.
Nwa akwukwo banyere ihe omumu, ihe nlere anya na otutu ihe omume mmasi. Otu mmasi m na-ede ma onye ozo na-ekiri vidio ma na-agu ihe nile metụtara ima nma, etemeete, onodu, ihe ịchọ mma, wdg ... Yabụ ebe a zuru oke ebe m nwere ike ịtọpụ ihe masịrị m ma gwakọta ihe omume ntụrụndụ abụọ. Enwere m olileanya na m nwere ike ịkọrọ gị ihe m maara banyere isiokwu a nakwa na gị onwe gị kwa, ga-enyere m aka ịga n'ihu na-amụ banyere isiokwu a na nkọwa gị. Daalụ maka ịgụ Bezzia.
Ọkachamara na netwọkụ mmekọrịta na ịntanetị na ejiji. Ọ na-amasị m ịgbaso ozi kachasị ọhụrụ yana ndụmọdụ banyere ịma mma ụmụ nwanyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịna-enwu gbaa, egbula oge soro m!
Blogger, onye mmebe, onye njikwa obodo ... enweghị izu ike yana ọtụtụ ọdịmma na-ewetara m isi m. Enwere m mmasị maka ejiji, sinima, egwu ... na ihe niile metụtara usoro na usoro ugbu a. Galizia n'akụkụ anọ niile, ebi m na Pontevedra n'agbanyeghị na m na-anwa ịkwaga dị ka m nwere ike. Anọgidere m na-amụ ihe ma na-amụ kwa ụbọchị, enwere m olileanya na ọkwa ọhụrụ a na-akwụghachi ụgwọ.
Abụ m ọkà n'akparamàgwà mmadụ na onye edemede, enwere m mmasị ịgwakọta ihe ọmụma na nka na ọtụtụ ohere nke iche n'echiche. Dị ka mmadụ, ọ na-amasị m inwe obi ụtọ banyere onwe m, yabụ, aga m enye gị ọtụtụ ndụmọdụ iji maa mma ma n'otu oge ahụ dị mma.
A mụrụ m na Malaga, ebe m toro ma gụọ akwụkwọ, mana ugbu a, m bi na Valencia. Abụ m onye mmebe ihe osise site na ọrụ, ọ bụ ezie na agụụ m maka isi nri dị mfe ma dị mma edugala m ịrara onwe m nye ihe ndị ọzọ. Nri ọjọọ mgbe m dị afọ iri na ụma, mere ka m nwee mmasị na kichin ahụike. Site mgbe ahụ gaa n'ihu, amalitere m ide usoro m na blog "The Monster of Recipes", nke dị ndụ karịa mgbe ọ bụla. Ugbu a enwere m ohere iji nọgide na -ekekọrịta usoro nri ndị ọzọ na-atọ ụtọ na blọọgụ ndị ọzọ n'ihi Actualidad Blog.
Nnọọ! Abụ m Marta, ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze na omiiko banyere ụmụaka. M na-eme vidiyo banyere ihe egwuregwu ụmụaka na ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ahụ kachasị. Na mgbakwunye na ị na-ekpori ndụ maka ha, ha ga-enwe ike inweta ihe ọmụma ga-enyere ha aka na usoro agụmakwụkwọ na mmekọrịta ha na mmadụ, na-amụta metụtara ezinụlọ na gburugburu ha n'ụzọ dị mma na nke obi ụtọ.
Nwa nwanyi Geek nwere mmasi banyere usoro, akwukwo na nwamba. Riri ahụ tii. Abụ m nwanyị Polish nke nwere Spanish na-ahụkarị ejiji na echere m na m nwere ike iweta echiche ọhụrụ na nke mbụ banyere ya. Ndị ọrụ anyị dị iche iche na-eme ka anyị pụọ iche ma anyị ga-erite uru na ha, njirimara anyị bụ isi ihe ga-eme ka anyị nwee ọganiihu na obi ụtọ.
Carmen Espigares setịpụrụ ihe oyiyi
Saịkọlọjist, Ọkachamara ọkachamara na onye njikwa obodo. Granaína nke ndụ niile na onye na-achọ ihe mgbaru ọsọ iji nweta. Fọdụ n'ime ihe omume ntụrụndụ m? Na-abụ abụ na mmiri ịsa ahụ, soro ndị enyi m nwee nghọta na ịhụ ebe ọhụụ. Onye na-agụ akwụkwọ na-emegharị emegharị na-adị njikere mgbe niile iche ihe ịma aka ọhụrụ ihu na ihu ọchị ya. Ingga njem, edemede na mmụta bụ ezigbo agụụ m. N'ọzụzụ na-aga n'ihu na onye na-amụ ọrụ na ndụ, n'ihi na ... na gịnị ka ha na-akpọ ibi ma ọ bụrụ na anyị anaghị atụcha ihe niile ọ na-enye anyị ...?
Crafts, crafts, okike imegharị ihe, onyinye ndị mbụ, ịchọ mma, ememe ... EGO niile.